Dhageyso:-Amar lagu soo rogey Shacabka degmada Xudur | SMC
Home WARARKA MAANTA Dhageyso:-Amar lagu soo rogey Shacabka degmada Xudur
Dhageyso:-Amar lagu soo rogey Shacabka degmada Xudur
Kadib kulan ay yeesheen mas’uuliyiinta kala duwan ee Maamulka degmada ee Xarunta Gobolka Bakool ayaa waxaa laga soo saarey amaro kala duwan oo la xiriira dhinaca Amniga,kaas oo la farey dhamaan Shacabka ku nool degmadaas.
Guddoomiyaha Howlaha Guud & Guryeynta degmada Xudur Cabdirisaaq Isaaq Saajin ayaa sheegay in kulanka laga soo saarey in qof aan qaan gaarin uusan degmada dhexdeeda ku wadi karin Mooto Bajaajta oo aad uga Shaqeysa degmadaas.
Sidoo kale dhamaan Ganacsatada degmadaasi Xudur geeya dawooyinka iyo Cabitaanada ayaa waxaa la farey inay iska hubiyaan Tayada Dawooynka ay ka ganacsanayaan,isla markaana aysan iibin karin kuwa waqtigooda uu dhamaaday ee dhacay.
Dadka ka dhega adeega aan fulin amarka kasoo baxay Maamulka degmada Xudur ee Xarunta Gobolka Bakool ayuu sheegay Guddoomiyaha inay ka qaadi doonaan tallaabo Sharciga waafaqsan.
Previous articleDowladda Turkiga oo ku dhawaaqday go,aamo looga horragayo Corona virus
Next articleDhaq dhaqaaqyo Ciidan oo ka socda Shabeellaha Hoose